Korea: Fisamborana an’i Minerva · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2018 9:27 GMT
Olo-malazan'ny Aterineto, voasambotra i Minerva nony farany (jereo GV tamin'ny 30/11/2008, anglisy). Ary naparitaka ny mombamomba azy. Nametraka azy ho manampahaizana manokana amin'ny resaka toekarena ireo honohono marobe, manampahaizana manokana amina Tsenambola, na lehilahy iray misahana toerana ambony amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mifanohitra tanteraka amin'ireo tombatombana ireo, fantatra ankehitriny fa telopolo taona ary olona tsy manana asa izy, nahazo diplôma taorian'ny taona roa nanarahany fampianarana ambony. Fa ireo media mahazatra marobe sy ireo fantsona mpampita vaovao an'ny fanjakàna dia mifantoka tanteraka amin'ny tena fiofanana nataony, hafa ny fahitàn'ireo (koreana) mpanao aterineto an'ireo zava-misy.
Voasambotra omaly ny filoha ara-toekarenan'ny Aterineto, “Minerva”. Rehefa nandre ny vaovao, [hitako fa] nahagaga ny mombamomba azy. Olona tsy anasa, telopolo taona izy, nahazo ny diplôma roa taona taorian'ny fianarana ambony. Ireo fahalalana lalina izay noporofoiny dia ireo an'ny olona iray nampiana-tena. Very fanantenana avokoa ireo izay nieritreritra azy ho zokiolona iray misahana toerana ambony ao amina orinasa mikasika ny Tsenambola. Olona mpitolona amin'ny alàlan'ny fitendry i Minerva, amin'ny resaka Aterineto. Na izany aza, be indrafo tamin'io mpitolona amin'ny alàlan'ny fitendry io ny ankamaroan'ny olona. Hitako fa tsara kokoa ho azy raha olona iray tsy anasa nianatra ny ara-toekarena samy irery izy. Raha tena izay, ho hafa kokoa no fipetraky ny raharaha. Marobe ireo mpanao Aterineto no nitsikera ny governemanta, izay hita ho tena ratsy lavitra noho ny tsy anasa iray tsy nandalim-pahaizana manokana akory mikasika ny toekarena . Ankoatra izay, marobe ireo hevitra naneho alahelo mikasika ny fisamborana azy sy ny fanohintohinana ny “fahalalahana maneho hevitra”. Tamin'ny lafiny iray, ny sasantsasany tamin'izy ireny nilaza fa nitondra dindo niiba tsy nahomby teny amin'ny fomba fihevitry ny olona i Minerva. Milaza ny mpanao Aterineto iray, “Elsaria-N” hoe: “Tezitra aho tamin'ny fahitako ny mombamomba an'i Minerva. Olona iray telopolo taona sy tsy anasa ary manana fahalalana tsara mikasika ny toekarena, izay no mampiseho fa ny faripahaizana dia tsy antony iray ampy hitsaràna ny olona”. Mpanao Aterineto iray hafa miteny koa hoe: “Tsy misy idiran'ny faripahaizan'i Minerva mihitsy. Ny zava-dehibe dia matsilo kokoa i Minerva raha oharina amin'i MB (ny Filoha Lee Myung Bak).” Mpanao Aterineto dimampolo ihany koa no nanipika fa “raha toa i Minerva voasambotra noho ireo vaovao tsy marina, dia ny Filoha, izay “nampanantena ny vahoaka ny 747″ sy ny “Sandambola 3000″ no tokony [koa] hosamborina.” miteny hoe: Nahoana no tsy samborintsika ireo olona ambony ao amin'ny governemanta, izay tsy dia manana fahaizana akory noho ny olona iray manana diplôma ambaratonga voalohany?” Olona ambony iray mpisehatra amin'ny Tsenambola: “Tianay horaisina hiasa ao anatin'ny orinasanay izy.”
[…] Nampifantoka ny sainy hihaino an'i Minerva ny olona sy ireo media, taorian'ny tsy naha-banky rompitra ny Lehman Brothers. Tamin'ny volana aogositra lasa teo, rehefa nanapa-kevitra ny handray indray ny Lehman Brothers ny Banky Fampandrosoana an'i Korea, namoaka lahatsoratra namporisika an'izany ny gazety maro. Saingy nolazain'i Minerva teo amin'ny Aterineto fa: “Azafady indrindra, aza iverenana raisina mihitsy [ireo]. Vintana farany io. Azafady indrindra foano ny fifanekena ary ampiasao amin'ireo PME na amin'ny asa io vola io.” Farany, banky rompitra i Lehman Brothers ary nanjary marina izay novinavianin'i Minerva. Manaraka izay eo koa ny sandan'ny fifanakalozana. Tamin'ny volana Aogositra lasa, notombanany fa hiakatra ho 1125 won ny takalon'ny vola koreana amin'ny dolara amerikana 1 amin'ny tapaky ny volana Septambra, ary ho lasa 1180-1200 won amin'ny faran'ny volana Septambra. Tamin'io fotoana io, nampiditra vola dolara andavitrisany ny governemanta ho eo amin'ny tsenan'ireo fifanakalozana mba hampamarin-toerana ny sandan'ny vola. Na izany aza, araka izay notombanan'i Minerva, mitohy niakatra hatrany ny tahan'ny fifanakalozana. Naminavina tamina tarehimarika tsy nisy diso sy nampivanàka i Minerva fa “raha tsy mitondra 30 miliara dolara isika amina fifanakalozana vola koreana sy amerikana, dia hihoatra ny 1400 won ny sandam-bola.”
Taorian'ny fanehoankevitra nataony, niakatra ho 1500 won ny sandan'ny fifanakalozana ara-bola ary amin'ny faran'ny volana oktobra, aorian'ny fifanekena fifanakalozana ara-bola eo amin'ny Korea sy Etazonia, marintoerana izy io. “Hidina teboka 400 ny KOSPI ary hidina be tokoa ny vidina trano. Ho zaraina roa ny sandan'ireo trano fonenana.” Tsy marina 100% io, saingy efa voalaza ny firodanan'ireo tsena fanakalzambola sy ny trano. Antony iray izay nanomezan'ireo mpanao Aterineto anarana hoe “Filoha ara-toekaren'ny Aterineto” azy, dia ireo soratra nataony feno fangorahana ny olom-pirenena. Naneho ny fideràny i profesora Kim Tae Dong hoe: ” ho an'ny vahoaka, mpampianatra ny toekarena izy.” The Economist, gazetiboky britanika iray, milaza azy ho toy ny “Nostradamus ety amin'ny tambajotra”.
Ankoatr'izay, tamin'ny taona lasa ny Fiarahamientan'ireo olom-pirenena ho an'ireo media demokratika dia nanendry tamim-boninahitra an'i Minerva ho “olom-pirenena ho an'ireo median'ny demokrasia”. Tsy misy iraharahàn'ireo mpanao Aterineto sy ireo mpomba azy ny hoe karazana olona toa inona izy. […] Na izy tsy mahomby na tsy anasa, tsy izay no zava-dehibe. Ny olana, dia tsy “izay maha-izy azy an'i Minerva”, fa ireo fanohintohinana ny fahalalahana maneho hevitra. Fanampin'izay, tena tandindonin-doza ny demokrasia ao amin'ny repoblikan'i Korea. […] Nentin'ny Aterineto ho antsika izay nilaintsika ary nantsointsika hoe “Minerva” izy io. Izay no antony tsy nanondroan'i Minerva olona iray, fa isika rehetra. Izay no antony nahatsapan'ireo mpanao Aterineto sy ny olona rehetra ho toy ny voaompa tamin'ireo fanambaràna natonan'ny mpitandro ny filaminana sy ireo media izay nanao amboletra nanolotra azy ho toy ny tsy anasa sy mpitolon'ny fitendry. Lasa Minerva izy, mety ho na iza na iza tamintsika izay tezitra amin'ny politika ara.toekarena sy sosialy ataon'ny governemanta ankehitriny. Sahala amin'ny sarimihetsika, tsy mahery fo tokana i V. Raha manohitra ny famoretana ianao, dia afaka ho V. Minerva dia tsy maneho olona tokana, fa ireo olona amin'izao fotoana izao.